Numeri 32 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Wɔkyekyee nkurow wɔ Yordan apuei (1-42)
32 Ná Rubenfo+ ne Gadfo+ wɔ nyɛmmoa bebree paa, na wohui sɛ Yaser+ asaase ne Gilead asaase yɛ baabi pa a wobetumi ayɛn mmoa. 2 Enti Gadfo ne Rubenfo no baa Mose ne ɔsɔfo Eleasar ne asafo no mu mpanyimfo no nkyɛn, na wɔbɛka kyerɛɛ wɔn sɛ: 3 “Atarot ne Dibon ne Yaser ne Nimra ne Hesbon+ ne Eleale ne Sebam ne Nebo+ ne Beon,+ 4 asaase a Yehowa adi so nkonim wɔ Israel asafo no anim+ no yɛ asaase pa a yebetumi ayɛn mmoa wɔ so, na wo nkoa nso nyɛmmoa dɔɔso paa.”+ 5 Wɔtoaa so kae sɛ: “Sɛ wobɛpene so a, fa asaase yi ma wo nkoa sɛ yɛn agyapade. Mma yenntwa Yordan.” 6 Ɛnna Mose bisaa Gadfo ne Rubenfo no sɛ: “Mopɛ sɛ mo nuanom kɔko na mo de motena ha? 7 Adɛn nti na mopɛ sɛ mubu Israelfo no aba mu sɛnea ɛbɛyɛ a wɔrentwa nkɔ asaase a Yehowa asi no pi sɛ ɔde bɛma wɔn no so? 8 Saa ara na mo agyanom yɛe bere a mesomaa wɔn fii Kades-Barnea sɛ wɔnkɔhwɛ asaase no.+ 9 Bere a wɔforo koduu Eskol Bon* no ho+ a wohuu asaase no, wobuu Israelfo no aba mu sɛnea ɛbɛyɛ a wɔrenkɔ asaase a na Yehowa de bɛma wɔn no so.+ 10 Saa da no, Yehowa bo fuwii denneennen, enti ɔkaa ntam sɛ:+ 11 ‘Mmarima a wofi Egypt bae a wɔadi mfe 20 rekɔ nyinaa renhu asaase a mekaa Abraham ne Isak ne Yakob ntam sɛ mede bɛma wɔn no,+ efisɛ wɔamfa wɔn koma nyinaa anni m’akyi. 12 Kaleb,+ Kenisini Yefune ba no, ne Nun ba Yosua+ nko ara na wobehu asaase no, efisɛ wɔde wɔn koma nyinaa dii Yehowa akyi.’+ 13 Enti Yehowa bo fuw Israel denneennen, na ɔma wokyinkyinii sare so mfe 40+ kosii sɛ awo ntoatoaso a wɔyɛɛ Yehowa ani so bɔne no nyinaa ase hyewee.+ 14 Seesei, moabesi mo agyanom anan sɛ mmarima abɔnefo asefo, na mopɛ sɛ moma Yehowa abufuhyew a ɛwɔ Israelfo so no yɛ kɛse. 15 Sɛ mosan fi n’akyi a, ɔno nso begyaw wɔn wɔ sare no so bio, na ɛba saa a, mode ɔsɛe bɛba ɔman yi nyinaa so.” 16 Akyiri yi, wɔsan baa ne nkyɛn bɛkae sɛ: “Ma yɛmfa abo nyɛ buw mma yɛn nyɛmmoa wɔ ha, na yɛnkyekye nkurow wɔ ha mma yɛn mma. 17 Yɛn de, yɛayɛ krado sɛ yɛbɛkɔ ɔko,+ na yebedi Israelfo anim akosi sɛ yɛde wɔn bedu baabi a wɔrekɔ. Na yɛn mma de, yebegyaw wɔn ama wɔatena nkurow a wɔabɔ ho ban mu, na asaase no sofo anyɛ wɔn bɔne. 18 Yɛrensan nkɔ yɛn afi mu kosi sɛ Israelni biara benya n’asaase a ɛyɛ n’agyapade.+ 19 Na agyapade a wobenya wɔ Yordan atɔe fam ne akyi no, yɛnka ho, efisɛ yɛanya yɛn agyapade wɔ Yordan apuei fam.”+ 20 Na Mose ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Monyɛ eyi: Momfa akode wɔ Yehowa anim, na monyɛ krado nkɔ ɔko no.+ 21 Sɛ mo mu biara fa akode, na mutwa Yordan no wɔ Yehowa anim na ɔpam n’atamfo fi n’anim+ 22 kosi sɛ mubedi asaase no so nkonim wɔ Yehowa anim+ a, ɛnde mubetumi asan akɔ mo nkyi,+ na morenni fɔ wɔ Yehowa ne Israel anim. Na asaase yi bɛyɛ mo agyapade wɔ Yehowa anim.+ 23 Nanso sɛ moanyɛ saa a, ɛnde na moayɛ bɔne atia Yehowa. Ɛba saa a, munhu sɛ mo bɔne bedi mo akyi. 24 Enti mubetumi akyekye nkurow ama mo mma na moayɛ buw ama mo mmoa,+ nanso ɛsɛ sɛ moyɛ nea moaka no.” 25 Na Gadfo ne Rubenfo no ka kyerɛɛ Mose sɛ: “Wo nkoa bɛyɛ nea me wura aka no. 26 Yɛn mma ne yɛn yerenom ne yɛn nyɛmmoa ne yɛn afieboa nyinaa bɛtena Gilead nkurow no mu hɔ.+ 27 Na wo nkoa de, yebetwa akɔ; ɔbarima biara bɛhyehyɛ ne ho akɔ ɔko wɔ Yehowa anim,+ sɛnea me wura aka yi.” 28 Enti Mose kaa wɔn ho asɛm kyerɛɛ ɔsɔfo Eleasar ne Nun ba Yosua ne mpanyimfo a wɔdeda Israel mmusuakuw agyanom abusuafi ano no. 29 Mose ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Sɛ Gadfo ne Rubenfo, ɔbarima biara a wahyehyɛ ne ho rekɔ ɔko wɔ Yehowa anim ne mo twa Yordan, na mudi asaase no so nkonim a, ɛnde momfa Gilead mma wɔn sɛ wɔn agyapade.+ 30 Nanso sɛ wɔamfa wɔn akode na wɔne mo antwa ankɔ a, ɛnde wɔbɛtena mo mu wɔ Kaanan asaase so.” 31 Ɛnna Gadfo ne Rubenfo no kae sɛ: “Nea Yehowa aka akyerɛ wo nkoa no, ɛno na yɛbɛyɛ. 32 Yɛbɛfa yɛn akode na yɛatwa wɔ Yehowa anim akɔ Kaanan asaase so,+ nanso Yordan agya ha na ɛbɛyɛ yɛn agyapade.” 33 Enti Mose de Amorifo hene Sihon ahemman+ ne Basan hene Og ahemman,+ ne nsaase a ɛdeda wɔn nkurow no ho, ne nkurow a ɛwowɔ nsaase a atwa ho ahyia so no maa Gadfo ne Rubenfo+ ne Yosef ba Manase abusuakuw fã no.+ 34 Gadfo no kyekyee* Dibon,+ Atarot,+ Aroer,+ 35 Atrot-Sofan, Yaser,+ Yogbeha,+ 36 Bet-Nimra+ ne Bet-Haran,+ nkurow a wɔabɔ ho ban. Na wɔde abo yɛɛ buw maa wɔn mmoa. 37 Na Rubenfo no kyekyee Hesbon,+ Eleale,+ Kiriataim,+ 38 Nebo,+ ne Baal-Meon,+ a wɔsesaa ne nyinaa din no, ne Sibma. Na nkurow a wɔsan kyekyee no, wɔmaa no din foforo. 39 Na Manase ba Makir+ mma kɔtow hyɛɛ Gilead so, na wɔfae, na wɔpam Amorifo a na ɛwɔ hɔ no. 40 Enti Mose de Gilead maa Manase ba Makir, na ɔtenaa hɔ.+ 41 Manase ba Yair nso kɔtow hyɛɛ wɔn so, na ɔfaa wɔn ntamadan nkurow no, na ɔtoo hɔ din Hawot-Yair.*+ 42 Na Noba kɔtow hyɛɛ Kenat ne ɛho nkurow nyinaa so, na ɔfae, na ɔde ɔno ara ne din Noba too so.
^ Anaa “san kyekyee.”